Gite Vintage 1894 kunye Spa
Indlu entle yelali esembindini wezidiliya zeChampagne ezinokuhlala abantu abali-9.
Siye ngendlela le ndlu ukuze uza kufumana bonke ubunewunewu ukuba imizuzu abasali kunye conviviality nentsapho okanye abahlobo, le SPA yangaphandle kunye egqubuthele aya kukuvumela ukuba bakhululeke emva kosuku lokutyelela Champagne okanye ukhetha i ngaphakathi yokugquma!
Indawo yabantwana iye yasekwa kunye nendawo yabakwishumi elivisayo/yabazali ukuze kungabikho mntu ulityalwayo.
Le ndlu inesitiya sabucala, i-terrace yangaphandle enefenitshala yegadi, indawo yokuphumla kunye nebarbecue apho kuya kuba kuhle ukuba nezidlo ngoxolo; kunye ne-pergola ene-SPA yabantu aba-5.
Indlu iqulathe kumgangatho osezantsi na igumbi lokuhlala flat screen TV kunye imboniselo umyezo, ekhitshini enkulu evulekileyo kunye efrijini American, multicooker, Nespresso ikofu umenzi bonke ubunewunewu ekuphekeni, igumbi ishawa Italian and WC; phezulu amagumbi amabini okulala anebhedi eyi-160x200 (umatrasi weSimba), elinye linescreen esisicaba, igumbi elinye elinebhedi eyi-90x190 kunye neebhedi ezimbini zombane ezingama-80x200 kunye nescreen esicaba; igumbi lokuhlambela elineshawa yokuhamba, ibhafu, isomisi setawuli kunye nokugcinwa, indlu yangasese, kunye negumbi elikhulu.
Esasayame indlu a studio sakhiwa lokulala kunye 160x200 esililini zombane, isikrini tyaba, itafile encinane kunye njengesihlalo lokutyela, uhamba-kwigumbi hlambi ne-WC, kunye nekhitshi kunye ifriji, microwave kunye Isitovu segesi.
Umgangatho ongaphantsi uguqulwa ube yindawo yokuphumla ene-sauna ye-infrared, igumbi lokudlala labantwana kunye negumbi lolutsha kunye nabazali abane-TV yescreen esicaba, i-console yemidlalo, ibhola yetafile kunye nebar.
Igaraji evaliweyo kunye nokuba kunokwenzeka ukupaka isithuthi phambi kwe-gîte, indawo yokupaka yamahhala kwindawo ekufutshane.
Iibhedi zenziwe ekufikeni, ilinen yokuhlambela inikezelwa.
Ukukwamkela, sikunika ibhotile yeChampagne kwimveliso yethu, entsha kwaye ilungele ukungcamla.
Ngokuza kummandla wethu omhle "iLa Champagne", uya kukwazi ukusebenzisa eli thuba lokuphumla ukutyelela ezona zindlu zihloniphekileyo zeChampagne kunye nabavelisi beChampagne abaya kukwenza ukuba ungcamle iChampagne yabo.
Unako kwakhona ukuhamba kwindlela yeVélo ehamba ecaleni kweMarne embindini wendalo.
Ungandwendwela isixeko Reims 35 imizuzu kude okanye Epernay ikomkhulu Champagne kuphela 15 imizuzu kude.
Ungalibazisi ukucela ingcebiso kuthi.
Sagqiba nomyeni wam ukufumana indlu kwilali yethu ukuvula indawo yokuhlala uze uvumele iindwendwe ukufumana mmandla yethu "Champagne" kwaye yonke imisebenzi lo, le ndlu ofakelwe kuthi ngokuzibeka nathi endaweni "client ".
Eneneni thina yenziwe "thina" zonke iinkonzo ukuba sifuna ukufumana xa sisiya kutyelela ummandla ngaphandle kuneyethu, ukuze abathengi bethu uzive wonwabile "ekhaya" yaye amagqabi kuhlala bazive okulungileyo. Kakhulu emihle iinkumbulo kwindawo ezolileyo, enoxolo kunye ne-cocooning.
Ikwalithuba lokufumanisa nokungcamla iChampagne yethu kuba singabavelisi.
I-40% yediphozithi efunekayo xa ubhukisha.
Nceda usifumane kwindawo: info@champagne-besnardchevalieretfilles.fr ukuthengiswa kweChampagne kwi-intanethi.
Sagqiba nomyeni wam ukufumana indlu kwilali yethu ukuvula indawo yokuhlala uze uvumele iindwendwe ukufumana mmandla yethu "Champagne" kwaye yonke imisebenzi lo, le ndlu ofakelwe ku…
Hlola ezinye iindawo onokukhetha kuzo e- Villers sous Chatillon